Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost faịlụ site PS2 Kaadị ebe nchekwa
Transcend kaadị ebe nchekwa foto ọnwụ ndapụta
Olee otú naghachi foto site na transcend kaadị ebe nchekwa
1 Enwere m ike Iweghachite ehichapụ PS2 Kaadị ebe nchekwa Njikwa?
M ehichapụ a egwuregwu na m chọrọ n'ezie ya laghachi azụ. Ọ bụ kwe m omume na-agbake ya si m PS2 kaadị ebe nchekwa? Bụla ga-ekwu ga-nnọọ uru.
Ọ bụrụ na ị jikọọ gị PS2 kaadị ebe nchekwa na kọmputa gị na ya nwere ike gosiri dị ka a mbanye akwụkwọ ozi, ị nwere ike omume naghachi ehichapụ faịlụ site PS2 kaadị nchekwa na-atọ ndị ọzọ software. My nkwanye bụ Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Data Recovery for Mac .Ọ bụ n'ezie irè naghachi PS2 kaadị ebe nchekwa data na Wondershare Data Recovery, n'agbanyeghị faịlụ na-efu ruru mberede nhichapụ, formatting ma ọ bụ ọbụna usoro njehie.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery naghachi data gị PS2 kaadị ebe nchekwa. Iji nweta a mma mgbake N'ihi ya, biko adịghị etinye ọhụrụ ọ bụla data n'ime gị PS2 kaadị ebe nchekwa mgbe ị na-faịlụ na-efu.
2 Igosi PS2 Kaadị ebe nchekwa File Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ebe a anyị na-Wondershare Data Recovery maka Windows dị ka ihe atụ. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, biko ibudata Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a Iweghachite ọnọdụ naghachi faịlụ site PS2 kaadị ebe nchekwa
Ebe ọ bụ na ị na-aga na-agbake ehichapụ faịlụ site PS2 kaadị ebe nchekwa, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite ọnọdụ" na-amalite usoro.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ furu efu ruru ka ihe ndị ọzọ, ị nwekwara ike gbalịa ọzọ 2 ụdịdị.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị PS2 Kaadị ebe nchekwa ka iṅomi na-ehichapụ Files
Ebe a nke usoro ihe omume ga-depụta niile partitions nke na kọmputa gị nakwa dị ka ejikọrọ nchekwa ngwaọrụ, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ otu nke gị PS2 kaadị ebe nchekwa na pịa "Malite"
Nzọụkwụ 3 Preview Hụrụ Files na-agbake PS2 Kaadị ebe nchekwa Files selectively
Mgbe iṅomi, niile hụrụ faịlụ gị PS2 kaadị ebe nchekwa niile ga-depụtara dị ka ha ụdị faịlụ ma ọ bụ mbụ ụzọ. Ị nwere ike ele aha ha na ego ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ. Ọzọkwa, ị pụrụ ọbụna ịhụchalụ hụrụ photos. Họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na mgbe ahụ ị nwere ike pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị etinye natara faịlụ azụ gị PS2 kaadị ebe nchekwa n'oge usoro.
1 Biko ndabere gị PS2 kaadị ebe nchekwa data ọma. Ọ bụ mgbe ukwuu-atụ aro ndabere PS2 kaadị ebe nchekwa data na kọmputa gị bụrụ na data ahụ nwere ike gharazie.
2 Wondershare Data Recovery-enye gị a ikpe mbipute elele ma faịlụ achọpụtara site na ọ bụ ihe ị na-aga na-agbake ma ọ bụ.
> Resource> Naghachi> PS2 Kaadị ebe nchekwa Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Echefuola faịlụ site PS2 Kaadị ebe nchekwa